सञ्चारकर्ममा जस्तै निर्देशनमा पनि अब्बल रामजी ! - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
काठमाडौं । सञ्चारकर्ममा राम्रो छाप छोड्न सफल रामजी ज्ञवाली पछिल्लो समय निर्देशनमा पनि अब्बल सिर्जनशीलता प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । यहिक्रममा उनको निर्देशनमा तयार रहेको सर्ट फिल्म ‘एक लभर’ सार्वजनिक भएको छ ।
दुर्गाप्रसाद ज्ञवालीको निमार्णमा तयार भएको ‘एक लभर’ आधा घण्टा लामो छ । चलचित्रमा प्रेम, बिछोड, रोदन मात्रै देखाइएको छैन, चलचित्रलाई निर्देशक ज्ञवालीले सुखद् अन्त्य गरिदिएका छन् ।
चलचित्रले सामाजमा युवापुस्ताको बढ्दो विदेश मोह र त्यसले प्रेम भ्रममा पार्ने असरलाई प्रस्तुत गर्नेरहेछ।